Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Maanta Ansixiyey Miisaaniyaddii ugu badneyd | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Maanta Ansixiyey Miisaaniyaddii ugu badneyd
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Maanta Ansixiyey Miisaaniyaddii ugu badneyd
Golaha Wasiirrada Dowladda Federaalka ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meel mariyay miisaaniyadda dawladda ee sannadka 2020 oo dhan $469.5 Milyan.
Kororka dheeriga ah ee ku yimid Miisaaniyadda 2020, badankeed waa mushaar loo kordhiyay ciidamada qalabka sida oo askari waliba uu heli doono mushaar dhan $200 bil waliba.
Ra’iisul Wasaare Xasan Khayre oo kulanka shir gudoominayay ayaa u mahad celinayay wasaaradaha Dhaqaalahaa iyo Dakhli Uruurinta oo miisaaniyadda 2020ka ku soo dhammays tirtay waqtigii loogu tala galay, dhammaan hey’adaha dowladda ee ka shaqeeyay kordhinta dakhliga dowladda iyo golaha wasiirada oo iyaguna ansixiyay miisaaniyadda.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa sheegay in miisaaniyadda 2020 ay ku sifaysantahay hiigsiga iyo horumarka dalka, ayna muujineyso dowlad hanaqaaday oo ahmiyaddeedu tahay ammaano iyo adeeg marka dalka deynta laga cafiyana ay sii kordhi doonto oo Balaayiin la gaarsiin doono.
Miisaaniyaddan ah ayaa tii ugu badneyd ee dalka laga ansixiyey wixii ka dambeeyey burburka dowladdii dhexe ee Soomaaliya.